Imaaraadka - ALinks
Maqaallo ku saabsan Imaaraadka
February 8, 2021 Antika Kumari UAE, fiisada
Haddii aad tahay qof degan fiisaha aan lagaa dhaafin, waxaad u baahan doontaa inaad hesho fiisaha Imaatinka Imaatinkaaga kahor imaatinkaaga. Waa inaad ku dalbataa laba nooc midkood fiisaha UAE. Waxaad aadi kartaa safaaradda oo aad codsan kartaa fiiso. Ama adiga
October 31, 2020 Maitri Jha UAE, fiisada
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad xusuusato ayaa ah in fiisada Imaaraadku ay tahay fiisaha Dubai. Marka, waad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan fiisada UAE halkan. Marka, maxaad ugu jirtaa maqaalkan? Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa fiisada Dubai ee Hindida. Dubai, marka laga reebo gudaha
Codso magangalyo ama magangalyada caalamiga ah gudaha UAE
April 14, 2020 Karuna Chandna qaxootiga, safarka, UAE
Haddii aad ka baqeyso cadaadis ama insaan ka baxsan bani'aadamnimada oo ka dhacda waddankaaga, waxaad dalban kartaa magangelyo (magangelyo). Halkan waxaa ku yaal sharaxaad kooban oo ku saabsan sida loo dalbado magangalyo ama magangalyada caalamiga ah ee UAE. Sida loo codsado
Hoteel raqiis ah iyo kuwa ugu Fiican Dubai
Imaaraadku waa meel layaableh oo laga bilaabo raadinta bariga dhexe. Waxay ku taal dhinaca bari ee Jasiiradda Carbeed, waa guri nooceedu yahay Dubai casri ah iyo Abu Dhabi, iyo waliba ciid ciid badan leh iyo
Nidaamka Iskuulka iyo Waxbarashada ee UAE
February 25, 2020 Antika Kumari dugsiga, UAE
Nidaamka Waxbarshada ee UAE Gudaha Dugsiga iyo Nidaamka Waxbarshada ee UAE wuxuu ku qasbay waxbarashadu dhammaan caruurta Emiratis ee da’doodu tahay shan jir iyo wixii ka sareeya, oo ay ku jiraan kuwa deggan. Waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbarashada sare ee machadyada waxaa la siiyaa qof kasta oo u dhashay UAE
Wax ka barasho UAE
November 29, 2019 Karuna Chandna waxbarasho, UAE
Barashada UAE Waxbarshada dibada loo raaco waxay la imaaneysaa adduunyo fursado cusub iyo waxyaabo la yaab leh, iyo Imaaraadku waxay leeyihiin waxkasta oo ka dhiga inaad daraasadaada dibedda wax ku soo bartay la xusuusto. Ku noolaanshaha inta aad wax ku baranayso UAE waa mid xiiso leh maxaa yeelay
Suuqyada Dukaameysi ee ugu Fiican UAE
Suuqyada laga dukaamaysto gudaha UAE !! Ma jiri karto ummad adduunka ku nool oo u adeegta dukaamaysiga sida ay UAE la macaamilaan. Gidaaraduhu waxay u adeegaan ujeeddo kasta oo ka imanaya barta kulan ee u dhexeeya asxaabta ama asxaabta ilaa gabbaad laga helayo qorraxda kulul ee kulul,
Meelaha ugufiican ee lagu booqdo UAE !!
1-Burj Khalifa Dhismaha ugu dheer adduunka oo leh dhererkiisu dhan yahay 828 mitir, Burj Khalifa ee Dubai waxaa loo yiqiin Burj Dubai. 162 qolal iyo anteeno ku taal dhismaha dusha sare ayaa wada siiyay
Waa Inay Hubiyaan Hoteeladaan Ugu Qiimaha Badan UAE !!
Hoteellada ku yaal Imaaraadka Carabta. 1-Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island Waxay ku taalaa Jas Island, Radisson Blu Hotel waxay bixisaa aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan badda, Yas Links Golf club iyo Yas Marina Circuit. Hoteelka ayaa bixiya 397 qolal marti ah;
Kahor Intaadan Xirmooyinkaaga Uxirin UAE..Barashada Miisaaniyadda Halkan !!
Immisa ayey ku kacaysaa inay u safarto Imaaraadka Carabta? AED1,014 ($ 276) waa celceliska qiimaha maalinlaha ah ee loogu safro Imaaraadka Carabta. Celcelis ahaan qiimaha cuntada ee Imaaraadka Carabta hal maalin waa